TALOOYIN LOOGU TALAGALAY CEELASHA SII KORDHAYA: BARO WAX WALBA OO KU SAABSAN DARYEELKA HABBOON IYO BEERITAANKA - SOOSAARKA DALAGGA
Xeerarka abuurista iyo daryeelka ee linden
Lipu marwalba waa la ixtiraamey waxaana ay tixgelisay ilo muhim ah. Geedka Tani waa daaweyn heer sare ah ee niyad-jabka iyo hypochondria. Ka mid ah xayawaanka, qofku wuxuu dareemaa raaxo, diirimaad iyo xasilooni. Aan aragno in ay suurtagal tahay in koritaanka linden ku yaala goobta iyo sida ay u adag tahay in la beero iyo daryeelka daryeelka quruxda.
Doorashada meel loogu beero linden beerta
Inkasta oo linden iyo waxaan loola jeedaa dhirta aan qabin, laakiin waa in ay maskaxda ku haysaa iyada wuxuu jecel yahay meelo qorrax leh. Cagaarka ma aha mid aad u bacrin ah, laakiin si fiican u miiray. Dhamaan dadka xayawaanka ah waxay dareemayaan qashinka lagu daro humus.
Waa muhiim! Marka aad dooranayso goob lagu beerayo, waa lagama maarmaan in la tixgeliyo in qaangaarka qaangaarka ah uu leeyahay cabbir weyn.
Inkasta oo ay tahay geed aan qabyo ahayn, noolaha liniinka waxay ku xiran tahay sida geedkii loo beeray. Waxa ugu fudud in lagu gooyo sabuunta loodka ah ee hawo qabow, cimilada qoyan. Waqtiga ugu wanaagsan ee lagu beerayo lini waa dayrta..
Waxaad ku beeri kartaa geedo guga, laakiin caleemaha dhalinyarada waa mid aad u xasaasi u ah dhaxan.
Beerto geedo linden yar yar
Xiniinyaha waxay si fiican u soo saartaa abuurka, laamood caleemaha iyo caleemaha xididka. Si kastaba ha ahaatee, geedka this waxaa badanaa faafin by geedo.
Ka hor inta aadan beerin linden, diyaariso qashinka. Wixii geedo caadiga ah leh height ah 50-70 cm, daloolka waa in ay ahaadaan 50 cm dhexroor iyo 50 cm qoto dheer.
Dheecaanku wuxuu ku shubaa hoose ee ceelka (10-15 cm) - caano, xashiish, lebenkii jabay. Lakabkani waxaa lagu daboolay humus lagu qasi jiray superfosphate (50-60 g).
Dhalo yar ayaa la dhigayaa godad diyaarsan oo lagu daboolay isku dar ah ciidda (1 qaybood oo ah sod, 2 qaybood oo ah humus iyo ciid). Heerka pH ee ugu fiicani waa 6.5-7.5.
Haddii dhowr geedood la beeray, masaafada u dhaxaysa godadka waa in ay ahaataa 3-4 mitir, haddii dillaacdo liniin ah la sameeyo, masaafada ayaa yareysa laba mitir.
Inkasta oo linden iyo tolerates caadi ahaan, laakiin marka beerto geedo waa in ay ka taxaddaraan ku saabsan rhizome. Qoorta asalka ah ee seedling waa inuu ku sii jiraa heer dhulka ah. Haddii qoortu yar tahay, maaha mid muhiim u ah lime. Ka dib markii laga beerto iyo 7-8 maalmood ee ugu horeeya, geedo yihiin waraabiyo badan.
Si biyuhu u ururaan meesha ay ka kooban tahay nidaamka xididada lida, waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo dalool meel u dhow.
Ma taqaanaa? Lipa - isku da'da da 'da dinosaurs. Waxay ku adkaysatay da'da barafka iyo kulaylka caalamiga ah. Lipu waxaa loogu yeeri karaa marqaatiga keliya ee dhacdooyinka waaweyn. Gabdhaha dhexe, gabdhaha ayaa lagu qabtay taariikhda hoose ee cirifka lindens, iyo qarnigii 18aad, kumanaan geedo lini ah ayaa lagu beeray sharaf weyn oo weyn oo Faransiis ah oo Faransiis ah. Tan iyo markaas, Linden waxay noqotay geed oo ah farxad iyo xorriyad.
Talooyinka Daryeelka Linden
Sida dalagyo badan, Linden waxay leedahay beerashada beeraha u gaar ah, oo ay ku jiraan waraabinta, quudinta, manjooyin iyo saarista cawska.
Xajka ayaa aad u dalbanaya waraabinta, gaar ahaan marxaladda seedling.
Marka qaangaar ah, geedku wuxuu u dulqaadanayaa abaar gaaban oo wanaagsan. Si kastaba ha noqotee, wakhtiga qalalan, waraabinta dheeraad ah ayaa looga baahan yahay heerka 1 baaldi halkii mitir labajibbaaran. m. Qiyaasida taajka lime
Si geed si ay uga raali noqdaan quruxdiisa iyo ubaxyo, waxaa lagama maarmaan ah in la ogaado sida iyo sida loo quudiyo linden guga. Guga hore, bacriminta waxaa laga codsadaa mullein (1 kg), HOL (15 g), amooniyam amooniyam (25 g), lagu qasi jiray toban litir oo biyo ah.
Dayrta, waa ku filan inaad bacrimiso linden leh 15-20 garaam oo nitroammofoski.
Ma taqaanaa? Lipa ayaa muddo dheer qadarisay Slavs. Sababta oo aan sabab u lahayn degsiimooyin badan ayaa la xiriira geedkan: Lipetsk, Lipnyany, Lipki, Lipovits, Podlipki.
Ka saarista cawska iyo ciidda xajinta ciidda
Ka saarida cawska ayaa ah qodob muhiim ah oo ku saabsan daryeelka liinaha dhirta - joogitaankooda ayaa hor istaagi kara koritaanka geed. Intaa waxaa dheer, isku mar marka la saaro cawska, waxaa lagama maarmaan ah in la dabciyo ciidda (si qoto dheer ah 10-15 cm) si ay u siiyaan helitaanka ogsijiinka xididada. Waxay u fiicantahay in la sameeyo loosening 2-3 jeer xilli kasta.
Mugajinta, sida jarida linden, waa qodob muhim ah marka koritaanka geed. Mulch-ku wareega goobaabin peat, caleemo dhacday, jajabyada qoryaha, balka dhoobada ama compost peat. Heerka lakabka waa inuu ahaado 8-12 cm.
Ma taqaanaa? Lipa waxaa loo yaqaanaa lutoshka, lutokha, lubnyak, urin.
Timaha iyo Gawaarida
Geediga ugu horeeya ee geedo waxaa la samayn karaa sanadka soo socda ka dib markii laga beerto. Gooyo waxaa loo sameeyaa ma aha oo kaliya in la sameeyo tufaax dhagax ah, laakiin sidoo kale ujeedooyin nadaafadeed. Xilliga jiilaalka iyo horraanta gu'ga, laamaha qalalan ayaa la gooyey. Koraaya qaabka qulqulka dildilaaca sanadka ugu horeeya guga hore iyo xagaaga dambe. Ka dibna, timo noocan oo kale ah waxaa la sameeyaa 4-5 jeer xilli ciyaareedkii.
Waa muhiim! In timo ugu horeysay ma gaabin kartaa laamaha by more than 1/3.
Inta badan dadka qaba linden waxaa ka mid ah cudurada sida:
dhibicyo iyo madow (hababka xakamaynta: burburinta miraha oo hoos u dhaca iyo caleemo ahaan ilaha caabuqa, daaweynta caleemaha 1% Bordeaux dareeraha);
kalluun cad (dagaalka) loo isticmaalo daawooyinka bakteeriyada leh, sida bakteer sulfate).
Marka lagu daro cuduradan, cayayaanka noocan oo kale ah ayaa sidoo kale khatar ah:
kuwa lamid ah;
aboor ku xeeldheer
Si loola dagaallamo cayayaanka, dhirta yaryar waxaa lagu buufiyaa cayayaanka. Marka lagu daro cayayaanku waxay waxyeeleeyaan shimbiraha dabiiciga ah iyo jiirka.
Doorashada lamaanayaasha iyo isticmaalka lime ee naqshadeynta
Linden waxaa loo isticmaalaa naqshada muuqaalka. Sababtoo ah isdhexgalka caleenta caleenta, dulqaadka hoosta wanaagsan iyo hoos u dhaca waraabinta iyo ciidda, noocyada kala duwan ee lini waxaa lagu beeray xaafadaha magaalooyinka, beeraha, burrayaasha, kalluumeysiga, iyo kambiyuutarada xagaaga. Dhirta liniinka ah ayaa sidoo kale si fiican u noolaan kara deegaan magaaladeed oo gardarro leh - waxaa si fiican u dulqaadan kara boodh, qiiq, gaas iyo wasakh.
Waxay jecel yihiin in ay isticmaalaan linden inta lagu jiro beerta iyadoo ay sabab u tahay saameynta qurxinta wakhti kasta oo sanadka ah. Xilliga guga, caleenta cagaaran ayaa caleemaha qulqulaya, iyo xagaaga cufan cufan wuxuu ku siinayaa hooskii lagu kalsoonaan karo. Linden oo ubax ah oo wanaagsan, marka la daboolo ubaxyo udgoon. Xilliga dayrta, caleenta waxay soo gashaa hooska dhalaalaya, oo kululaanaya cimilada daruurta leh. Xagga sare ee qulqulka barafka wuxuu ku dhuftey dusha sare ee geedka. Waxay ku koraan lime sida daaqada, daboolka, derbiga iyo derbiyada cagaaran. Foomamka noocan oo kale ah ayaa maanta loo adeegsadaa naqshadaynta jardiinooyinka. Linden wuxuu u muuqdaa mid wanaagsan oo ku jira geedo kali ah iyo kooxo geedo ah oo kala duwan iyo noocyo kala duwan. Diyaargarowga geedaha dabiiciga ah, waxaa lagama maarmaan ah in la tixgeliyo sida ugu dhakhsaha badan ee xawaaraha koraya iyo doorka uu ka ciyaari karo geeddi-socodkan: si aad u noqotid diiradda ugu weyn ama xayawaanka dhirta kale.
Waa muhiim! Dhirta wadada dhinaceeda ah ee loo yaqaan 'linden' ayaa ku xanuunsan kara cusbo, gaas iyo boodh. Xaaladahaas oo kale, dhirta ayaa aad ugu nugul cudurada iyo cayayaanka.
Inta badan naqshada muuqaalka waxay isticmaalaan noocyo noocyo kala duwan ah sida:
Ameerika (madow). Wadanka ka mid ah liniitadan waa Waqooyiga Ameerika. Wuxuu koraa illaa 40 mitir, wuxuu leeyahay taaj sarux badan.
Cuntada la dubay. Vatland - Yurub iyo Galbeedka Siberia. Cirbadaha caleemo yar yar iyo tufaax dhexdhexaad ah.
Silvery. Wild-koraya leh caleenta dhaqaale ee asalka ah.
Rubra. Geedka sarre leh ee taajka konik. Ciriiri midab leh oo midab leh oo ah caleemo yar yar.
Linden caadi. Qurxoon muuqaal leh taaj weyn oo loogu talagalay hal degaan iyo koox.
Su'aasha ah "waxa loo beerayo xiga lime" waxaa lagu siin karaa jawaab qeexan: ku dhowaad dhammaan geedaha, geedaha, dalagyada cawska. Linden wuxuu u muuqdaa mid udhexeeya:
Tan iyo markii xayrtu ay tahay geed dari ah, warshadaheeda waxaa loo isticmaali karaa iyadoon cusboonaysiin ilaa laba boqol sano.
Ma taqaanaa? Ubaxa Linden waxaa lagu matali karaa naqshad: * K5C5A5 + 5 + 5 + 5G (5)
Lipa - daawo iyo malab qiimo leh
Lipa, sababtoo ah joogitaanka walxaha bayoloji firfircoon ayaa leh waxyaabo faa'iido leh.
Ujeedooyinka daaweynta, isticmaal:
Midabka Linden. Waxay leedahay saameyn xoog leh oo diaphoretic iyo saamaynta durida. Si wax ku ool ah u yareeya heerkulka, dagaalayaa dagaalo kala duwan. Decoction ah ee ubax lamin ah waa lagama-maarmaan for hargabka.
Bark. Qalab fiican si loo xoojiyo dhismaha. Jilbile yaryar ayaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo gout, xannuun, gubasho.
Wood Laga soo bilaabo waxaa laga helaa cayayaanka, taas oo si waxtar leh u daaweyn cambaarta.
Caleenta iyo burooyinkeeda. Waxaa loo adeegsadaa sidii carjawda loogu talagalay boogaha.
Miraha. Waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo dhiigbaxa.
Dhuxul Waxay leedahay awooda u gaarka ah ee lagu xiri karo walxaha waxyeelada leh mugga 90 jeer ka weyn kan u gaar ah. Waxaa loo isticmaalaa sunta, qaaxada, shubanka, cudurada caloosha iyo mindhicirrada, iyo sidoo kale daaweynta nabarrada furan.
Sidaa darteed, ka hor inta la gooyey linden, tixgeli dhammaan sifooyinka wanaagsan ee dhirta this-bogsiiyo.
Diyaarinta alaabta ceeriin ee caanaha ah ee wax soosaarka warshadaha waxaa laga qaadaa geedo da'doodu tahay 90 sano. Wakhtigan la joogo linden ayaad ka heli kartaa inta ugu badan ee alaabta ceeriin ah.
Linden waxaa sidoo kale loo isticmaalaa kikoemoolikada sida qayb muhiim ah ee soo saarista maqaarka iyo alaabta daryeelka timaha.
Intaa waxaa dheer, Linden - geedo malab ah oo fiican. Malab lime ma aha oo kaliya lagu kala duwan yahay dhadhankiisa iyo caraf udgoon, laakiin sidoo kale by guryaha bogsiinaya. Dhamaan lindens waxaa lagula talinayaa in lagu koro goobta. Sidaa darteed, waxaa suurtagal ah in la kordhiyo wax soo saarka ee bees iyo tayada malab dhowr jeer.
Waa muhiim! Inkasta oo xaqiiqda ah in linden uu leeyahay sifooyin badan oo faa'iido leh, waxa suurtogal ah in aan la qaadin dadka qaba cudurrada wadnaha joogtada ah.
Marka ugu horeysa, waxay u muuqataa in calaamadaha sii kordhaya ay tahay shaqo adag. Laakiin, isagoo tirinaya dhammaan faa'iidooyinka geedkan, waxaa la soo gabagabeyn karaa in dhammaan kharashka shaqadu uu u qalmo. Haddii aad ogtahay sida loo doorto sapling linden, sida loo abuuro oo loo daryeelo mustaqbalka, waxaad had iyo jeer yeelan doontaa bogsiiye dabiici ah iyo geed qurux badan oo aan qabyo ahayn oo kugu farxi doona wakhti dheer oo aad xasuusinayso carruurta aad dhaleen.